Xiliga Uurka Iyo Galmada Wax Kabaro Caafimaad Ahaan Ka Faaideyso. | Gaaloos.com
Home » galmada » Xiliga Uurka Iyo Galmada Wax Kabaro Caafimaad Ahaan Ka Faaideyso.
Xiliga Uurka Iyo Galmada Wax Kabaro Caafimaad Ahaan Ka Faaideyso.
Maalmahaan, dadku waxay si ka fudud si kasta oo hore uga hadlaan galmada. Si kasta ha ahaatee, dadku mararka qaarkood way ka weji gabxaan iney ka hadlaan galmada iyo uurka waxaana laga yaabaa iney dhibaato ka qabsato iney su’aalo ku saabsan galmada ula yimaadaan takhtarkooda ama kalkaalisada.
Haddii kani uu yahay ilmahaagii ugu horreeyey, waxaa laga yaabaa inaadan ogaannin in uurku uu yahay waqti dareenkaaga badalmo uu adiga iyo aabbaha ilmaha isu kiin beddelo.
Waxaa laga yaabaa inaad dareento daal, niyad kacsanaan, farxad, diiqo, rajo, cabsi, hooyonnimo iyo qurux, lur iyo soo jiidasho la’aan. Aabbuhu, dhinaca kale, waxaa laga yaabaa inuu dareemo inuu ku faano inuu ilmo aabbo u noqdo ama uu ka wel welo mas’uuliyado cusub.
Waxaa soo socda qaar ka mid ah jawaabaha su’aalaha ku saabsan galmada ee inta badan dhiba lammaaneyaasha ilmaha filanaya. Haddii aad su’aalo dheeraad ah qabtid, ama haddii aad dhibaato galmo aad qabtid waqtiga uurkaaga oo aadan adinku xallin karin, talo weydiiso takhaatiirteenna adigoo kala soo xiriira emailkaan help@somalidoc.com. Inkastoo, laga yaabo inaad u maleyso in su’aashaadu ay tahay mid nooc ah, dadka kale waxay dhab ahaantii qabaan walaac kaas la mid ah.
Qaar ayaa laga yaabaa iney ka fogaadaan galmada, iyagoo dareemaya rabitaankiisa oo aad u yar. Kuwa kale ayaa laga yaabaa iney doonayaan galmada iney lammaanahooda uga helaan dib u xaqiijinta inuu weli jecel yahay waxayna u arkaan mid soo jiidasho leh.
Takhaatiir badan ayaa dareen xooggan ka qaba jawaabta su’aashaan. Waxaa kuugu wanaagsan inaad raacdid talada takhtarkaaga.
Marmar, ragga qaarkood jir ahaan “way damaan” waqtiga uurka lammaanahooda. Badanaa dareenku waa iska ku meel gaar, waana inaan loo arag diidmo. Lammaanahaagu waxaa laga yaabaa inuu qabo walaacyo kale oo xoogaa ah iyo dareemmo isku dhafan oo ku saabsan uurka, kuwaasoo laga yaabo iney ka dhigaan inuu dhaqmo si aan kala jelcaan lahayn inyarna kuu nuglaado. Waxaa sidoo kale laga yaabaa inaad ku lug yeelato nolosha gudahaaga ku jirta taasoo laga yaabo inuu dareemo inaadan isaga dan u lahayn. Iskala hadla dareemmadaan.
Waxaa laga yaabaa inaad ka wel welsan tahay in laga yaabo in ilmaha aad waxyeeshaan. Ilmuhu si wanaagsan ayuu u dhowran yahay isla markaana haraatida iyo is rogiddu shaqo kuma lahan hawshaada galmada.
Haraatida ilmuhu waxaa laga yaabaa iney ku xusuusiso doorka lammaanahaaga ee sidii hooyo oo kale. Waxaa laga yaabaa inaad u dareento sidii qof saddexaad oo la socda galmadiinna. Waxaa laga yaabaa iney idin caawiso inaad isku daydaan boos kale si markaas aadnaan u dareemin dhaqaaqa ilmaha.
Title: Xiliga Uurka Iyo Galmada Wax Kabaro Caafimaad Ahaan Ka Faaideyso.